Endrika Mpandika Teny : Amadou Lamine Badji, Fijery Miabo Sy Fisokafana Amin’ny Hafa · Global Voices teny Malagasy
Endrika Mpandika Teny : Amadou Lamine Badji, Fijery Miabo Sy Fisokafana Amin'ny Hafa
Voadika ny 08 Janoary 2018 1:32 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Français
Amadou Lamine Badji, sary natolony
Tohizantsika ny andian-dahatsoratra ‘enriky ny mpandika teny’ ho an'ny Global Voices amin'ny teny frantsay.
Mpiaramiasa tsy tapaka amin'ny Global Voices miteny frantsay i Amadou Lamine Badji,hatramin'ny efa ho imy taona izao. Ahitàna karazany maro ny lahatsoratra fidiany, araka ny asehon'ireo fandikàna farany nataony : Fitondràna folara : Niteraka Resabe ny RAboto Iray Manao Folara Tao Amin'ny Trano Fisakafoanana Tao Bangladesh ; Mitety an'i Japana Amin'ny Bus… sur YouTube, na koa ny : Rapport Netizen : les militants égyptiens incarcérés auront-ils droit, un jour, à la justice ? (Tatitry Ny Mpisera: Indray Andro Any, Hanana Zo Hahazo Fitsaràna Ve Ireo Ejiptiana Mpikatroka Naiditra Am-ponja?).
Ao Dakar, renivohitra Senegaly izy no monina, ary mamaly amin'ny alàlan'ny imailaka ny fahalinanay.
Global Voices (GV): Amadou, iza moa ianao ?
Amadou: Oaooo, filozofika be ilay fanontaniana ! Mponin'ny tany aho, teraka sy lehibe tao Senegaly efa ho antsasaka taonjato iray izay. Kolejy iraisampirenena iray tao no nianarako, nitsidika firenena vitsivitsy teto amin'izao tontolo izao, toa an'i Japàna – fitsidihana ara-kolontsaina – ary Kanadà mba hianatra momba ny fitantanana (BAA) tany amin'ny andian-taona 90. Olona manana fijery miabo aho ary misokatra amin'ny hafa toy ny mahazatra hita ao Senegaly. Raisin'i Nosside sy ireo poeta vitsivitsy ao Senegaly ho toy ny poeta ihany koa aho nanomboka tamin'ny 2010.
GV: Tantarao aminay ny fomba nahafantaranao ny Global Voices, sy ny nahatanga anao hitsiriritra handray anjara ao ?
Amadou: Ny toetra maha-mpisera tia karokaroka ahy no nahalatsaka ahy tao amin'ny GV fony aho nanomboka nanao asa fandikàna azo lazaina ho sady maimaimpoana no tsy maimaimpoana tey anaty aterineto tamin'ny 2010, ary avy hatrany dia nambabo ahy ilay fandraisana mahafinaritra nataon'i Claire Ulrich, ny fanahin'ny fahasamihafàna sy ny firinran'ny fiarahamonina GV. Tsaroako ihany koa fa tafahaona tamin'i Marie-Laure Le Guen aho tao Dakar, herinandro vitsivitsy taorian'ny nanombohako niasa tato amin'ny GV tamin'ny Martsa 2013, fony izy handeha ho any Kenya. Tena nampiontam-po ahy tokoa ny hoe vetivety dia afaka nahita tava mpikambana iray avy amin'ny GV !
GV: Mpandray anjara iray tsy tapaka sy tsy mivadika ianao. Firenena sy lohahevitra samihafa no hita anatin'ireo lahatsorarao. Amin'ny alàalan'ny inona no isafidiananao azy ireny?
Amadou: Tiako ny mandika ireo lahatsoratra manome lanja ny fijery miabo, miavaka, vaovao, izay rehetra mampiseho ny hatsaràn'ny fahasamihafàna ara-kolontsaina, ny fahafahamanaon'ny aterineto sy ny teknolojia ary koa ny fanajàna ny zo iraisan'ny rehetra – iray amin'ireo andalana fototra ijoroan'ny famoahan-dahatsoratry ny GV.
GV: Nandritra ny taona voalohany niainanao tat amin'ny GV, nanoratra lahatsoratra iray momba an'i Aimé Césaire ianao. Afaka resahanao aminay ve ny momba izay? Manana lohahevitra hafa tianao hosoratana ve ianao?
Amadou: Eny, tsroako iny lahatsoratra iny, izay nosoratako niaraka tamin'ny fandrisihana tsy nitsahatra nataon'i Anna Guèye – Hanry am-piadanana anie ny fanahiny. Nandritra ny vanimpotoana nanaovako andrana fanoratana na fandraisana anjara tsindraindray tamin'ireo fifaninanana mamorona tononkalo – mbola tohizako foana hatramin'izao arakaraky ny aingam-panahy sy ny fisian'ny fotoana. Tsingerintaona fahazato nahaterahan'i Aimé Césaire tamin'izay fotoana izay no sady koa nitrangan'ny famonoana feno fankahalàna nanjo ilay tanora amerikana mainty Trayvon Martin.
Aleoko kokoa mandika lahatsoratra mampiseho ny fomba fijeriko amin'ny fomba hafa toy izay manoratra, mety vokatry ny hakamoana angamba izany…
GV: Misy fifandraisana ve ny asa taonao ho an'ny GV sy ny asa fitadiavanao?
Amadou: Eny, hatramin'ny 2010 dia misy io fifandraisana io satria aho miasa ao Dakar hatramin'ny 1993, aminà iraka tsy maharitra manao asa toy ny Mpiandraikitra tetikasa amin'ny fitantanana, haivarotra ary fandikàna. Ny fandikàna ho an'ny GV ia ahafahako mitoetra ho mahafantatra mandrakariva ireo fironana misy.
GV: Inona ireo teny fampiasànao? Eo amin'ny sehatry ny asa? Anaty tontolon'ny asanao?
Amadou: Ny frantsay sy ny anglisy raha eo amin'ny sehatry ny asa fitadiavana sy fiainana manokana, manampy ny Ouolof, ary misy kely Diola sy arabo amin'ny alàalan'ny Korany Masina.
GV: Anisan'ireo tena mavitrika sy mahavaly haingana ianao ao anatin'ny tariky ny GV frantsay. Midika inona ho anao io vondrom-piarahamonina ‘virtoaly’ io?
Amadou: Tena tiako be ny vondrona GV izay itarafako ny maha-izaho ahy. Nampahafantariko an'i Gwen Lefeuvre fa ireo asa fandikana ataony dia mampiseho smombiny amin'ilay toetra mora tohina ananan'ny afrikàna, ary izy sy izaho dia samy mandika lahatsoratra mitovitovy lohahevitra.
Rehefa hitako koa fa ao Brighton izy no monina, dia nolazaiko azy fa tamin'ny fahatanoràko dia efa novakiako ny « Le rocher de Brighton » nosoratan'i Graham Greene, ary Gwen dia nampahafantariny ahy ilay mpanoratra tantara tena be mpahafantatra amin'izao fotoana izao ao Brighton, Peter JAMES, tamin'ny alàlan'ny fandefasana tamin'ny paositra ny iray tamin'ireo tantara farany nosoratan'ingahy io « Dead man’s grip ». Dia toy izay no nahalasa anay ho mpinamana bebe kokoa.
GV: Misy faniriana ve momba izay zavatra avoakan'ny GV ?
Amadou: Tsy dia misy loatra, mino ao fa manaja ny matoandahatsorany ny GV – fiarovana ny fahalalahana, ny fahasamihafàna ary ny fahalalahana maneho hevitra indrindra indrindra. Faly aho nahafantatra omaly fa hoe nambaran'ny Praiministra Etiopiàana ny famotsorana ato ho ato ireo rehetra gadra noho ny resaka politika, ary indrindra fa ireo avy amin'ny bilaogin'ny Sivy. Mahatsapa ho toy ny nandray anjara tsy mivantana tamin'izy io aho tamin'ny alàlan'ny asa fandikàna ataonay ao amin'ny GV.